Farsamaynta Degenaanshaha: Habab fudud oo kor loogu qaado bakhaarka jikada - Salisbury Submit-Kitchen Faucets, Dheryaha Faylasha Weelka, Qasnadaha Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Farsamaynta Deganaanshaha: Habab fudud oo kor loogu qaado bakhaarka jikada - Salisbury Submit
2020 / 09 / 29 QoondayntaTilmaamaha qasabada 12115 0
Shakhsiyaadka waxay waqti dheeri ah ku qaadanayeen guriga deggenaanshaha sannadka 2020 marka loo eego sannadihii ka horreeyay, iyo in hubaal ah in howlaha ku hareeraysan guriga ay isu beddeleen mudnaan. Hal fikrad dejinta degenaanshaha oo u adeegta labalaab macaashka koox sameynta iyo sameynta karinta guriga deganaanshaha deegaanka dheeraadka ah saaxiibtinimo ayaa ah in dib loo qiyaaso jikada jikada. Bakhaar waa qol ama armaajo meesha cuntada, cabitaanka iyo gogosha ama suxuunta lagu keydiyo. Bakhaarrada ayaa laga yaabaa inay yihiin meelo aad waxtar u leh oo soo bandhigaya keydka jikada. Guryo badan oo moodada ah ayaa lagu xardhay bakhaarro, hase yeeshee guryaha duugga ah waxay u baahan karaan wax-ka-beddel si loo abuuro bakhaarro dheeri ah oo waxtar leh. Ha ahaato ama aan ka soo bilaabmin xoqid ama wax ka beddel bakhaar xaadir ah, tilmaamayaasha soo socda ayaa laga yaabaa inay ka caawiyaan hawlaha inay si sahal ah u sii socdaan.
• Kordhi kaydinta taagan. Isticmaalka aagagga toosan waxay gacan ka geysan kartaa hagaajinta awoodda keydinta. Ku dhis nooks dheeraad ah adoo ku maalgelinaya dambiilo hoosta lagu keydiyo. Dambiilyadan ayaa isla markiiba abuuri kara aagag loogu talagalay dhowr nooc oo cunsurro ah. Milkiilayaashu waxay sidoo kale raadin karaan habab ay uga dhex adeegsan karaan albaabbada armaajo dhexdooda ama waxay ku dari karaan armaajooyin dheeri ah qaybaha ama dhalada.
• Ka fikir waxa aad rabto. Ka shaqee qalabka aad rabto inaad ku dhex iibiso bakhaarka gudahiisa wixii ka dambeeya kaydinta farsamooyinka kaydinta u dhigma. Tusaale ahaan, ikhtiyaarrada kaydinta ayaa laga yaabaa inay astaan ​​u yihiin dhalooyinka khamriga, dambiilo loogu talagalay baradhada iyo wax soo saark kala duwan, oo loo sii daayo qalabka guryaha yaryar, iyo xitaa inay soo jiidaan sagxadaha wax lagu dubo ama looxyada lagu jaro.
• Isticmaal kaydinta nadiifka ah. Ku rid waxyaabo ku jira weel nadiif ah, oo hermetic ah oo cabirro is barbar dhig ah si aad si fudud ugu ogaan karto qalabka aad rabto. U beddelo aalado culus, sida badarka iyo dubista oo la siinayo, haamaha kaydinta si loogu ekaado.
• Qalabka jumladaha iibka ah meelo kale. Iibsashada baaxadda leh waxay noqon kartaa mid qiimo jaban, hase yeeshe aaladaha waaweyn waxay si dhakhso leh u cuni karaan hantida dhabta ah ee ku jirta bakhaarka. U qoondee meel kale oo ka mid ah badeecadaha waaweyn ee aan haligmi karin, sida walxaha waraaqaha ah ama aaladaha qasacadaysan, oo u eg qolka kaydinta ama adeegga.
• Soo jiida khaanadaha waxtar bay leeyihiin. Khaanadaha jiidaya ayaa dib u soo ceshan kara baahida loo qabo in la raadiyo lana helo qalabka. Khaanadahaani si habboon ayey u soo baxaan sidaa darteed aaladaha ku dhex jira mar labaad waxaa laga heli karaa cunnooyin dhib leh oo laga galo albaabka laga soo galo. Khaanadaha waxaa loo qaabeyn karaa in loo dhiso guri bakhaar kasta.
• Ka dhig mid la heli karo. Tixgeli tixgelinta cidda ka qaadanaysa qalabka ka jira bakhaarka. Ku rid cunnada fudud dhallinta yar sariirta hoosteeda meesha ay ka heli doonaan, ka dib taas oo u diyaarinaya armaajooyin kala duwan oo loogu talagalay dadka waaweyn ee deggan guriga. Dib-u-hagaajinta bakhaarka ayaa ku dari kara meel waxtar leh oo loogu talagalay keydinta oo ka dhigaysa mid ka mid ah qolal badan oo ugu mashquulka badan shaqada guriga si wax ku ool ah.
Hore:: Qiimaha Dib-u-hagaajinta Jikada ee tixgelinta la siinayo Next: Waa Maxay Isbedelka Socda Ee Dhamaadka Qasabada?
2021 / 02 / 04 16828
2021 / 02 / 03 16442
2021 / 02 / 03 12453
2021 / 01 / 28 12220
2021 / 01 / 28 6844
2021 / 01 / 28 18411